Dhageyso: Barlamaanka oo la hor keeney Magacyada 168 xildhibaan ee saxiixay Mooshinka R/W Saacid & niyad jab ku yimid R/W Saacid – idalenews.com
Iyaddoo mudo shaki laga muujinayey magacyada xildhibaanada Mooshinka soo gudbiyey ayaa waxaa maanta si rasmi ah baarlamaanka looga hor akhriyey kuwa ay yihiin xildhibaanada doonaya inay xukuumada Ra’iisul wasaare Saacid Farax meesha ka baxdo.
Waxaana tirada hore oo aheyd 168 xildhibaan oo khamiistii hore soo gudbiyey magacyadooda kusoo biiray laba xildhibaan oo kale kuwaasi oo tirada inta mooshinka wadata ka dhigaya 170 xildhibaan.
Xildhibaan Khaalid Cumar Ali oo u hadlayey xildhibaanada mooshinkan keenay ayaa baarlamaanka u akhriyey sababta ay xukuumada Saacid uga hor yimaadeen iyo magacyada intooda isku raacsan in kalsoonida lagala noqdo xukuumadiisa.
Waxaa markii magacyada xildhibaanada laga hor akhriyey barlamaanka soo ifbaxay in Ra’iisul Wasaare Saacid uu meesha ka baxaayo, iyadoo tirada 139 xildhibaan oo fadhiga joob joog ahaa ay si rasmi ah u sheegeen in ay Mooshinka saxiixeen oo wax kalsooni ah u haynin ra’iisul wasaaraha.
Guul weyn ayey u tahay Madaxweyne Xasan oo uu isaga khilaaf kala dhaxeeyo R/W Sasacid, waxaana madaxweynaha looga fadhiyaa laga bilaabo maanta inuu doondoono shaqsigii bedeli lahaa R/W Saacid maadaama si cad ay u muuqato in uu R/W Saacid baneyn doonto booska.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowlada Nigeria